Etu esi enweta mmanu mmanu n 'akwa - Ejiji
Etu esi enweta mmanu mmanu n'ime akwa tupu ya agbaa ma obu tinye ya
How Get Grease Out Clothes Before It Stains
Ma ha sitere na anụ ezi na-awụ akpata oyi n'ahụ, cheese pizza na-amị amị ma ọ bụ gri nke igwe kwụ otu ebe gị, mmanụ griiz nwere ike ibibi ụbọchị gị. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị ihe niile siri ike ịnweta griiz site na uwe, n'agbanyeghị ụdị akwa ị na-eme. Lee ụzọ abụọ dị mfe ga-ahapụ uwe gị ka ọ dị ọhụrụ.
Njikọ: Etu ị ga-esi nweta Chocolate si n'uwe (Asrịọ Enyi)
Etu esi enweta mmanu mmanu n 'akwa na akwa nhicha
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịtụkwasị uwe gị n'ime ịsa ahụ ma nwee olile anya nke kachasị mma, ọ ka mma ịmebe nsị mmanụ. Na-asa ákwà omo O yikarịrị ka nzọ gị kachasị mma maka akwa igwe nwere ike ịsacha, mana enwere ike iji ya na ụfọdụ ihe nwere mkpado na-atụ aro ịsa aka ma ọ bụ ihicha-asacha (ọ bụ ezie na anyị agaghị akwado ya maka silk siri ike ma ọ bụ ọtụtụ swit knit, ọkachasị cashmere).
Dina ihe n'elu ala dị larịị, tinye ntakịrị ihe mmiri mmiri na-adịghị mma ozugbo na nsị ma jiri nwayọ na-ete ya.
Mee ka onye nchacha ahụ nọdụ maka nkeji abụọ na ise tupu ya aghaa ihe ahụ site na asacha na ọnọdụ kachasị elu nke akwa ahụ nwere ike ijikwa.
Nyocha ugboro abụọ na nsị ahụ apụla kpamkpam wee sachaa ọzọ (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa) tupu etinye ihe ahụ na draya.
Etu esi enweta mmanu mmanu n'ime akwa na ncha efere
Ọ gaghị eju anyị anya na ngwaahịa anyị ji egbutu griiz na efere na pans ga-adị mma na ịkwa mmanụ site na akwa. N'ezie, ụfọdụ ndị folks na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ nke ọma karịa ncha akwa iji nweta akara ndị a dị egwu site n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwa ọ bụla.
Dina ihe n'elu ala dị larịị ma tinye nza nke ncha efere ozugbo na ntụpọ. Gbasaa ncha ahụ ka o wee kpuchie ntụpọ niile. Hapụ ya ka ọ nọrọ ọdụ nkeji ise ruo iri.
Jiri mkpịsị aka gị jiri nwayọ rụọ ọrụ ncha ahụ n'ime akwa. Ga-ahụ mbadamba unyi ka ị na-arụ ọrụ.
Jiri mmiri ọkụ hichaa uwe ahụ. Ọ bụrụ na ntụpọ ahụ ka dị, megharịa usoro ahụ ọzọ tupu ị kpoo akwa ahụ.
Ihe ole na ole ị ga-echeta:
Ọsọ Bụ Igodo
Dị ka ọtụtụ stains, ngwa ngwa ị na-emeso akara griiz, ọ ka mfe iwepu ya. Ọ bụrụ na ịnweghị ohere ihicha ngwaahịa, ma ọ bụ ọbụlagodi mkpịsị aka nhicha, tinye nsị ahụ na mmiri ma ọ bụ tinye nnu ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ artificial (iji nyere aka gbochie ntụpọ ahụ ịtọ, na-eme ka ọ dịkwuo mfe iwepụ mgbe e mesịrị) ruo mgbe ị nwere ike ịdaba na sink ma ọ bụ igwe ncha.
Na-enyocha aha uwe gị mgbe niile
Na-agụ akara nlekọta mgbe niile tupu ị na-agwọ uwe n'ụzọ ọ bụla. N'ebe ahụ, ị ​​ga-amụta etu mmiri ga-esi na-ekpo ọkụ, ma enwere ike ịkwanye ihe ahụ n'ime draya mgbe emesịrị yana ma uwe ahụ ọ dị oke nhịahụ maka usoro a ma kwesiri ịmịchaa-akọrọ kama.
ọgwụgwọ ụlọ maka dandruff n'oge oyi
Njikọ: Esi Wepu nsị na ụdị ọ bụla nke Countertop
kacha mma na-eto eto na fim 2015
meghee iji belata abụba dị n'úkwù
esi tufuo abụọ agba mgbatị
ụbọchị ọmụmụ nri abalị menu echiche
Omenala nri nke china